अल्ट्रासोनिक उच्च स्पीड ब्याच मिक्सर - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिक हाई स्पीड ब्याच मिक्सर
हाईस्लेचरको अल्ट्रासोनिक हाई स्पीड ब्याच मिक्सरहरूको लागि भिटिंग, हाइड्रेशन, होमगेनलाइजेशन, पीस, फैलावट, इमुलेशन र भंग गर्ने सामान्य अनुप्रयोगहरू छन्।
अल्ट्रासोनिक बैच मिश्रण उच्च गतिमा विश्वसनीय छ, विश्वसनीय उत्पादन परिणाम ल्याब, बेंच-माथि र पूर्ण व्यावसायिक उत्पादन मापनको लागि विश्वसनीय परिणामको साथ प्रयोग गरिन्छ।
हेलसिचको बहुउद्देश्य ब्याच होमगेनसेर्सले तपाईंलाई वर्दीको ठोस / तरल र उच्च तरलको उत्पादन गुणको जवाफ दिने तरल / तरल मिश्रणको उच्च गति प्रदान गर्दछ।
उच्च गति ब्याच अल्ट्रासाउन्ड उच्च कतरनी बलों संग मिश्रण
अल्ट्रासोनिक homogenizers हुन् अत्याधुनिक समाधान तपाईंको ब्याच र यसका लागि इनलाइन मिश्रण अनुप्रयोगहरूको लागि सोसाइटी को शामिल, सजायको तयारी फैलावट, deagglomeration र आकार रिडक्सन कण, हाइड्रेशन, घुलनशीलता र चाँडो मिश्रण गर्दै। Hielscher को अल्ट्रासोनिक मिसिनहरु उप-माइक्रोन ह्यान्डल गर्दछ & नानो सामग्री र साथ फाइबर – परिणामस्वरूप विश्वसनीय प्रोसेसिंग र उच्च गुणस्तरको उत्पादन। The प्रमुख फायदाहरु को अल्ट्रासोनिक मिश्रण संग यसको उपयोग को आसान छ घर्षण सामाग्री, वातावरण को मांग मा यसको सरल स्थापना, जस्तै corrosive सर्तहरू, साथसाथै छिटो र विनाश-कम सफाई (CIP / SIP) र एकदम महत्त्वपूर्ण तल्लो प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकिहरु भन्दा ऊर्जा खपत (जस्तै रोटर-स्ट्याटर मिक्सर, जेट मिक्सर, उच्च कतरनी मिक्सर, अल्ट्राट्रायक्स)।
जब उच्च ऊर्जावान अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरू तरल पदार्थ र स्लालहरूमा मिलाइन्छ, उच्च रक्तचाप / कम दबाव चक्रहरू (जस्तै 20,000Hz मा प्रति सेकेन्ड 20,000 चक्रहरू) वैक्यूम बुलबुलेहरू उत्पन्न गर्दछ वा तरलमा आवाज गर्दछ। यो बुलबुले धेरै चक्र बढ्छ जब सम्म तिनीहरू उल्लङ्घन गर्न सकिँदैन किनकि उनीहरुले अधिक ऊर्जा अवशोषण गर्न सक्दैनन्। बबल प्रत्यारोपणको समयमा, स्थानीय स्तरका चरम अवस्था उत्पन्न हुन्छ: 5,000 किलोसम्मको तापमान, 2,000 फिटसम्मको दबाव र 280m / वेगको तरल जेटहरू। यो घटनाले cavitation लाई निषेध गरिएको छ। अल्ट्रासोनिक cavitation सफलतापूर्वक अनुप्रयोगहरू, मिलिंग र पीसिंग गर्न सफलतापूर्वक लागु गरिएको छ। उदाहरणका लागि कोलोइड, पाउडर, तरल पदार्थ, तेलहरू, तेल, रेजिनहरू, एपक्सिसहरू, पिग्ने टाठहरू, मसीहरू, पेंटहरू, सिलिकोनहरू, क्रीम, जील्स, बहुलकहरू, यूरेथनहरू र धेरै धेरै प्रक्रिया गर्न।
अल्ट्रासोनिक ब्याच प्रोसेसिंग
किन अल्ट्रासोनिक्स? – पूर्ण प्रक्रिया नियन्त्रणको लागि
अल्ट्रासोनिक मिक्सिङले तपाईंलाई सबै महत्वपूर्ण प्रक्रिया मापदण्डहरू ठीकसँग नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। सबै कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्दा इष्टतम प्रक्रिया परिणामहरू प्राप्त गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ।
सोनोट्रोड (अल्ट्रासोनिक सींग / जांच) मा क्षैतिज क्षेत्रहरूको विस्थापनले अल्ट्रासोनिक उपकरणको शक्ति सेटिङ, सोनोट्रोड को चयन र बूस्टर सींगको उपयोग गरेर प्रक्रियाका आवश्यकताहरु समायोजन गर्न सकिन्छ।
पुष्टिकरण प्रक्रियाको लागि दबाव लागू गर्ने प्रक्रिया-तीव्रताले कार्य गर्दछ, र हानिकारक (एमएस) भनिन्छ। माथिल्लो दबाब अन्तर्गत अल्ट्रासोनिक cavitation अधिक तीव्र र हिंसक बढ्दै जान्छ। यसैले, हेलसेस्टरले प्रेसिजन योग्य प्रदान गर्दछ बन्द ब्याच रिएक्टरहरू।
सामान्य नियमको रूपमा, sonication अवधि लामो, प्रक्रिया को अधिक प्रगति, जस्तै आकार को कमी, फैलावट आदि – प्रदान गरिएको छ कि प्रक्रिया तीव्रतालाई असर गर्न पर्याप्त तीव्रता लागू गरिन्छ।
अल्ट्रासोनिक एक गैर थर्मल, मेकानिकल प्रविधि प्रविधि हो। थर्मोडिनियनिक्सको व्यवस्थाको कारण, तथापि, विषयमा सामेल भएको ऊर्जा सधैं गर्मीमा समाप्त हुनेछ। यद्यपि, उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता हेलसेस्टरको अल्ट्रासोनिक्सले यो अनुमान सुनिश्चित गर्दछ। प्लगबाट सबै ऊर्जाको 95% अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरूमा परिवर्तन गरिनेछ र प्रक्रिया माध्यममा युग्मित गरिन्छ।
प्रक्रिया माध्यमको अस्पष्टता अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंगको लागि एक महत्वपूर्ण कारक हो। कण आकार को कमी, मिलिंग र फैलाव को रूप मा अनुप्रयोगों को लागि, cavitational shockwaves को कारण अंतर-कण टक्कर एक मुख्य प्रक्रिया को प्रभावहरु मध्ये एक हो जसले कणिक ब्रेकेज को कारण हुन्छ, एक उच्च कण लोड फायदेमंद हुन्छ।
इष्टतम प्रक्रिया सर्तहरू निर्धारण गर्ने (= न्यूनतम ऊर्जा इनपुटको साथ उत्तम परिणाम) निर्धारण गर्न, माथिको नाम परिमितिहरू लक्षित प्रक्रिया लक्ष्य अनुसार स्थापित हुनुपर्छ।
सम्भावना परीक्षण र प्रक्रिया अनुकूलन सजिलै प्रयोगशाला र बेंच-उच्च स्केलमा सजिलै लिन सकिन्छ। सबै प्राप्त परिणामहरू बिल्कुल हुन सक्छ reproduced र स्केल-अप रैखिक रूपमा उत्पादन आकारमा। हेलसिच अल्ट्रासोनिक्सले तपाईंलाई पेशेवर प्रदान गर्दछ परामर्श र एकदम सुसज्जित ल्याब प्रक्रिया हामी हामीसँग यो वा तपाईंको लागि प्रक्रिया अनुकूलन गर्न सक्छौं!
हेलसिच अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया समाधानको लागि तपाईंको विशेषज्ञ हो। आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई तपाईंको इ-मेल आवश्यकताको समाधान गर्न उपयुक्त इकाई सिफारिस गर्न खुशी छौं!